HomeWararka CiyaarahaLiverpool 4-0 Southampton, Reds oo Garoonka Anfield ku dubatay kooxda Southampton
November 27, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
kooxda Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield ku Xasuuqay kooxda Sopunthampton kulan ku tirsan Horyaalka Premier league-ga oo ku soo dhamaaday 4-0.
Xidigaha Diogo Jota, Thiago Alcantara iyo Virgil van Dijk ayaa Reds ka caawiyay guushooda kulankan.
Daqiiqaddii labaad ee ciyaarta ayay Liverpool heshay gool degdeg ah oo uu Diogo Jota ku hubsaday goolka Southampton kaddib markii uu kubbad hadiyad ah ka helay Andy Robertson oo isagana uu gacan soo siiyey Sadio Mane oo kala shaqeeyey garabka bidix.
Liverpool ayaa laga diiday gool uu Sadio Mane u dhaliyey daqiiqaddii 13aad, markaas oo uu madax ku qabtay kubbad laad xor ahayd oo uu soo tuuray Andy Robertson.
Daqiiqadii 32aad Xiddiga reer Portugal ee Diogo Jota ayaa mar kale shabaqa soo taabtay oo hoggaanka usii dheereeyey kooxdiisa Liverpool, waxaana uu goolka ku leexiyey kubbad uu Mohamed Salah u hor-dhigay goolka isaga oo usoo dhaafiyey difaacyahannada.
Thiago Alcantara ciyaarta ka dhigay 3-0. Daqiiqadii 37aad Kubbad uu kasoo qaatay khadka dhexe ayuu lugta midig ugu soo xaadhay dhinaca bidix, kaddibna darbo xoog badan ayuu lugtiisa bidix ku toogtay, waxaanu ku hubsaday shabaqa iyadoo goolhaye McCarthy uu jiho qaldan u booday maadaama ay ciyaartoy kooxdiisa ah kusii dhacday.
Virgil van Dijk ayaa dhaliyay goolka afraad ee kooxdiisa qaybta dambe oo waxyar socotay Daqiiqadii 57aad, isaga oo xerada ganaaxa ka helay kubbad uu soo laaday Alexander-Arnold, taas oo uu ku qabtay lugta halkii laga filayay madax guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 4-0.
Natiijadan ayaa ka dhigan in Liverpool ay yeelatay 28 dhibcood, waxaanay hal dhibic u jirtaa Chelsea oo hoggaanka haysa halka ay Man City laba dhibcood dhaaftay, laakiin labadan kooxoodba waxay ciyaari doonaan berri, haddii ay guuleystaana isbeddel ayay ku samayn karaan booska Liverpool iyo farqiga dhibcaha intaba.